पत्रपत्रिकामा स्वास्थ्य | Nepali Health- Part 3
एक्सरे गर्न अस्पताल जाने बिरामीले जेनेटर आफै लानुपर्ने ?
April 29, 2019 April 29, 2019 Nepali Health Comment
डोल्पा, १६ बैशाख । उपचार गर्न आउने बिरामी आफैं जेनेरेटर बोकेर अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता डोल्पालीको छ। जिल्ला अस्पतालमा एक्सरे मेसिन चल्ने पर्याप्त बिजुली नहुँदा रोग पहिचानका लागि स्थानीय जेनेरेटर बोक्न बाध्य भएका हुन्।
लाइसेन्स परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल
April 11, 2019 April 11, 2019 Nepali Health 1
काठमाडौँ, २८ चैत । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा अभ्यासको अनुमति दिन एमबीबीएस उत्तीर्ण डाक्टरका लागि सञ्चालन गरेको परीक्षामा ७५ प्रतिशत डाक्टर फेल भएका छन् ।
कर्णाली रोज्ने बाहिरका डाक्टर एक जना मात्र !
April 10, 2019 April 10, 2019 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २७ चैत । कर्मचारी समायोजनका क्रममा बाहिरका एक जना डाक्टरले मात्र कर्णाली प्रदेश रोजेका छन् । कर्णालीमै कार्यरतमध्ये पनि अधिकांश डाक्टरले बाहिरकै अस्पताललाई कार्यथलो छानेका छन् ।
April 8, 2019 April 8, 2019 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २५ चैत । सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सामान्य अवस्थामा पनि १५ हजार चिकित्सक अपुग रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
बन्द हुने अवस्थामा कान्ति बाल अस्पताल
March 31, 2019 March 31, 2019 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १७ चैत । देशकै एक मात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी र बजेट अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । तीन सय १५ बेडको कान्ति बाल अस्पतालले पछिल्लो एक महिनामा ४६ बेड कटौती गरेको छ ।
निःशुल्क औषधिको ४१ करोड फ्रिज
March 28, 2019 March 28, 2019 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, १४ चैत । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि नपाएर विपन्न नागरिक निजी पसलबाट महँगोमा किन्न बाध्य छन् । तर, सरकारले निःशुल्क औषधिका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभई ‘फ्रिज’ भएको छ । सरकारको बजेट फ्रिज हुने र विपन्न नागरिकले औषधि नपाउने स्थिति औँल्याउँदै महालेखानियन्त्रक कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ ।
March 18, 2019 March 18, 2019 Nepali Health Comment
March 13, 2019 March 13, 2019 Nepali Health 1
तीन करोड जनतालाई १४ सय डाक्टर !
March 12, 2019 March 12, 2019 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २८ फागुन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १ हजार ४ सय चिकित्सक कार्यरत छन् ।
सुई र रुई समेत नभएका सरकारी अस्पताल
March 10, 2019 March 10, 2019 Nepali Health Comment
काठमाडौँ, २६ फागुन । फलामले काटेर गम्भीर चोट लागेपछि तानसेन नगरपालिका–११ बन्दीपोखराका १५ वर्षीय गोविन्द बोहरालाई आमा भीमाले बिहीबार जिल्ला अस्पताल दौडाइन् ।